Sida loo Travel Eco Friendly In 2020? | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Sida loo Travel Eco Friendly In 2020?
Eco safarka saaxiibtinimo waa safka hore ee maskaxda our sidii aynu galaan this toban sano cusub. Iyada oo u ololeeya deegaanka sida Robert Swan iyo Greta Thunberg, fariinta dunida waxaa lagu gacangeliyey la caddeeyo crystal. Waxaan soo baxeen waqti inuu saameyn waarta caalamka iyo dhawrida khayraadka qaali ah iyada.
Change bilaabmaa maanta oo nala, go'aamada waxaan ka dhigi in kor loogu qaado dalxiiska masuul ka. Sida aan loo noqdo kuwo intan ka dhawrsada saamaynta ku saabsan deegaanka iyo safarka waarta dadaallada, weli waxaan u muuqdaan in ay ka fekeraan bey'ada saaxiibtinimo safarka in aad u ballaadhan dareen. safarka Responsible ma jiro wax dheer aan dooran kartaa in aad ka qayb halkan iyo halkaas. Waa wax loo baahan yahay in la intricately-xidhkii galay nolol maalmeedkeena, noqoto nooca labaad.
Isbeddelkani waxa wanaagsan samaynayo hirarka horusocod ah oo dhan warshadaha ee safarka caalamiga ah. goobaha Travel waxaa soo bandhigid ah awoodda tamarta qoraxda, nidaamka dib u warshadaynta biyo la higeliyey si loo yareeyo isticmaalka iyo caag ah ayaa noqonaya isticmaalka a xumaado ee la soo dhaafay. Waxaa jira dhaqdhaqaaq qoto dheer caalamka ku kaca oo ka mid ah in, rajo iyo go'aanka, si togan daydo u noqon doonaa in ay jiilalka mustaqbalka ee dadka safarka ah kacsi ah. Halkan waxaa ku qoran talooyin top on Sida loo Travel Eco Friendly our:
Rail Transport Ma The Eco Friendly Jidka Si Safarka. thwaxaa article waa qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
The Bygone Grace Of Tareenka Safarka
dad badan ayaa doortay in la yareeyo raadkooda kaarboonka ay duulaysa yar ama by jarida baxay safarka diyaaradda si buuxda u, inta badan jawaab u buzzword Sweden duulimaadyada ceeb (ceeb duulimaadka). Waxaa qarsoon ma ahn in safarka hawada hadda waa mid ka mid ah ka qayb galay ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya isbedelka cimilada. Inkasta oo duulaya mar walba noqon doonaa ciyaaryahan muhim in sida aan u doortaan in ay safarka, waxaan u baahan nahay in la is xasuusiyo in noocyada kale ee u safraya dalab cajiib ah fasaxyada bey'ada.
safarka tareenka ayaa nostalgic a teesto ambiance nimcada iyo waa xoog badan a bey'ada saaxiibtinimo safarka initiative. Waxay bixisaa kala duwan oo ka mid ah faa'iidooyinka ay ka mid yihiin legroom more, qadeysaa gaariga cuntada ah halka riyaaqayaa muuqaal qurux badan, Tegay kids waa ka fog fudud iyo kuwa doonaya in ay sii joogaan xiran, ma jiro qaab duulimaad ah. safarka tareenka si cad u dhiganta safarka masuul ka.
Noqo Eco Friendly, Leave raadkoodii Kaliya
Meel kasta oo aan safarka, waa in aan ka tago raadkoodii kaliya. Sida safra bey'ada, waxaan hore u tiqiineen. Si kastaba ha ahaatee, la-rogga noogu riixaya in ka badan samayn, waxaan sii qaadan kartaa tallaabo this. Waxa ugu wanaagsan in la arko waa safra wada ku biiro iyo ka tago meel ka sii wanaagsan tahay waxaan ka helnay. Wax kharash soo qaado dhawr xabbadood oo qashin ah in aan arko xeebta ah ama duurka. Waxaa intaa dheer, tuurida waxaa ka mid ah sax ah oo macnaheedu yahay in aysan dhul ilaa badda.
Cun Oo Cab Local
Taageerida maxaliga ah ma aha oo kaliya ah bey'ada saaxiibtinimo safarka initiative laakiin sidoo kale waa qayb qaateen upliftment bulshada. Gadashada degaanka ka dhigan tahay in qofna lahaa inuu qaado alaabta kuwa. xitaa more, ganacsiyada maxaliga ah waxay leeyihiin fursad ay ku baraaraan. Waa yaraynta raad carbon ah iyo guul bulshada degaanka.
Noqo A Part Of The Sheeko Eco Friendly
Baaxaa A noqdo isbeddel ah sababtoo ah waxa ay qayb ka wada hadalka caalamiga ah. Sida socotada ah bey'ada ka go'an in ay bey'ada saaxiibtinimo safarka mabaadi'da, waxaan u baahan nahay si ay u galaan iyo qayb ka mid ah sheeko ah kuwaasi oo noqon. codadka waxay leeyihiin awood. Sida aan la safra la shaqayn jiray iyo sida isgaadhsiin aan u safraan geesood gaarka ah ee dunida dacaladeeda,. Waxaan u baahan nahay in ay sii faafo fariinta. Waxaan kasta oo kale oo keeni by tusaale ahaan iyo sida aan kuwan isbedel loo baahan yahay ka dhigi in nolosheena gaarka ah iyo sida aan ka qayb dalxiiska waarta, waxaan dhiirrinaya dadka kale inay sidaas oo kale sameeyaan.
Isticmaalka Gaadiidka Dadweynaha Or Walk
Inkasta oo ay u muuqan karto unappealing markii hore iyo baaritaan loo baahan yahay in la sameeyo oo la xiriira ammaanka gaadiidka dadweynaha iyo dalal, transit mass waa bey'ada saaxiibtinimo si ay hareeraha safarka. Waxa uu isticmaalaa qadar si wayn hoos shidaalka per rakaabka marka la barbar dhigo baabuur.
caga A howlan film ku socoto ah si ay isu quusin oo dhan waxa ay leedahay in dalab. Waxaa run ahaantii ma hab fiican si ay ula falgalaan dadka ay waa, la kulmaan dhaqankeeda, iyo ku raaxeysiga deegaanka ku hareeraysan. Qaadashada gaadiidka dadweynaha sameeya kaliya in iyo socodka waa mid lagu beddelan karo xataa si fiican.
Pack Light Oo Eco Friendly
Waa fikrad khaldan weyn oo iftiin xirxirida waa qiimo lahayn. iftiinka xirxirida shaki la'aan waa bey'ada mabda'a safarka saaxiibtinimo waxaan oo dhan si fudud u qaataan karaa oo waxa ay leedahay saamayn weyn. The aan pack fududee, ka fududee hababka gaadiidka our miisaami iyo this tarjumayaa in isticmaalka shidaalka ka yar.
Hab kale oo aad qayb ka ciyaaro safarka waarta waa in ay leeyihiin eegno kit safarka. Xirmada An safarka bey'ada saaxiibtinimo ka koobnaan doonaan suurto gal ah caday baasaboorka a, baararka shaambo, iyo saabuun baalasho halkii aad ka marin lahayd jellada qubeyska. Shaambooyin yaryar iyo qaboojiyeyaal iyo tumblers-aan caddeyn-karin. Aluminium water bottles are vital as well as a metal straw.
The-rogga safarka ugu weyn ee 2020 ayaa tilmaamaya in safarka khibrada waa hab cusub in safarka. dhaqaaq ka badan, waa Classic. Taas ayaa ka dhigaysa qol-aragnimo dhaqanka noqono, hawlaha, iyo aragti gaar ah oo ku saabsan meelaha loo socdo.
Dooro Shirkado go'an tahay safarka Sustainable.
Ka fikir meel loo ahaadana iyadaa u baahan Dalxiiska.
Haddii aan daryeel ku saabsan deegaanka oo aan jeclahay farshaxanka safraya, waxaan dhowraan doonaa, ilaali, oo safarkayaga ka dhignaa wax micno weyn u leh wanaagga wadajirka ah ee meeraha iyo bey'ada dalxiiska. Bilow tayaasha safar tareen leh Save A tareenka, maanta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Sida loo Travel Eco Friendly In 2020?” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-eco-friendly%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
EcoFriendlyTravel ecotourism europetravel greentransportport Diiwaangelinta dadweynaha masuulnimo tareen safarka
top 5 Waxyaabaha la sameeyo On A Short Booqo Si Luxembourg
Tareenka Safarka Luxembourg, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe